Ukwakha Ubuninzi be-Twitter kunye no-Semalt
Ngaba ufuna ukwakha ubukho kwimicimbi yoluntu ngakumbi i-Twitter? Isiseko esomeleleyo ngokuqinisekileyo sithatha ixesha elininzi kunye nemigudu, kodwa i-Twitter iyindawo ekhethekileyo kwaye iyamangalisa ukwenza loo nto. Unokwenza uphawu lwakho okanye ukwandise inani leembono ngokufumana unxibelelwano oluninzi kunye nabalandeli kwi-Twitter. Kulo thunyelwe, u-Artem Abgarian, Semalt uMphathi oyiNtloko kuMpumelelo weMakhasimende, uya kukuxelela indlela yokuqalisa ngokuthengisa nge-Twitter.
Gcwalisa iProfayili yakho
Into yokuqala okufuneka uyenze izalise iprofayili yakho ye-Twitter. Makhe ndixelele apha ukuba le nyathelo lokuqala lokudala uphawu kunye nokwazisa ihlabathi malunga nekhompyutha yakho nakwi-social media presence. Njalo gcina ukhumbule ukuba i-Twitter ivumela abasebenzisi bayo ukuba bahlanganise iinkcukacha zabo, ngoko ke leli thuba legolide ukuba ungeze ikhonkco lakho lewebhu okanye izixhumanisi zenkqubo yokudibanisa kwiprofayili yakho ukuze abantu bakwazi ukukubona ngendlela engcono - how to find my super member number. Ngaphezu koko, kufuneka ungeze umfanekiso ojongene nobuchwepheshe kwiprofayili yakho ukuze abasebenzisi bakwazi ukufumana ingcamango yokuba ungubani.
Qhagamshelana nabantu kwiNiche yakho
Emva kokuba ugqibezele iprofayili yakho, isinyathelo esilandelayo kukuxhuma nabantu kwi-industry yakho okanye kwi-niche. Ukufumana ngubani ohambelana noshishino okanye intsimi yakho, kufuneka uhlole i-Twitter analytics kwaye uklikha iqhosha labalandeli ukuba ukhangele uluhlu lwabo bantu. Ngaphezulu, unokujonga abantu ngokukhawuleza kwiziphumo zophando ze-Twitter uze uhlole iingxelo zabo ngaphambi kokuba udibanise nabo..Indlela elula yokudibanisa nabachaphazeli kukumakisha kwii-tweets zakho phantse nsuku zonke. Kufuneka ucele imibuzo emininzi kwaye uzame okusemandleni akho ukutsala abantu abaninzi ukuba bafike phambili baphendule imibuzo yakho.
Qinisekisa amaxesha amahle kwiTweet
Ngokusekelwe kwintsimi kunye neendawo zabalandeli bakho, unokufumana ixesha elifanelekileyo leetweets. Zama ukusebenzisa izixhobo ezili-Twitter ukwenza ukuba kwenzeke. Ngokomzekelo, iTwittersphere sisixhobo esihle esithembisa ukukunika ulwazi oluyimfuneko xa abalandeli bakho bekhompyutheni kwaye yintoni ixesha elifanelekileyo leetweets.
Yabelana ngeNkcukacha ezixabisekileyo
I-Twitter isinika ezininzi iinketho kunye neengcamango zokwabelana ngomxholo. Unokuzuza kubo ukunyusa inani leembono. Kubaluleke kakhulu ukwabelana ngomxholo obalulekileyo kwaye uvumele abalandeli bakho ithuba lokufunda nokusabalalisa umxholo wakho. Xhumana nabo kanye ngosuku kwaye uphendule imibuzo yabo, ngokusekelwe kumxholo oye wabelana ngawo kwi-Twitter.
Nxaxheba kwiingxoxo ze-Twitter
Ingxoxo ye-Twitter inokukhetha ukuthetha nabanye kunye nokuhlela izinto zakho. Kufuneka uzuze kuyo kwaye wandise inani lakho labalandeli. TweetIi-intanethi yindlela ekhethekileyo yokuxoxa nge-Twitter ekunceda ukuba uthathe inxaxheba kwiingxoxo zentlalo yoluntu. Unako ukwandisa okanye unciphise uluhlu nje ukuthetha kunye nabalandeli bakho kwaye uzame ukwenza abalandeli bakho.
Ngezinto ezingentla ngentloko, unokufumana abalandeli abaninzi be-Twitter kwaye unokwandisa ulwazi lwenkcazo yakho ngokubanzi.